Guddoomiyaha Cusub ee Cayaaraha Iyo Dhalinyarada gobolka Bari oo Xilka La Wareegay[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Guddoomiyaha Cusub ee Cayaaraha Iyo Dhalinyarada gobolka Bari oo Xilka La Wareegay[Sawirro]
Gudoomiyaha Cusub ee Ciyaaraha iyo Sportiga gobolka Bari Abshir Cali Yusuf (Boqorka) ayaa maantay si rasmi ah ula wareegay xilka Gudoomiyenimo ka dib markii xilka laga qaaday Gudoomiyihii hore Mustafe Majacase.
Xafladda Xil wareejinta ah ayaa waxaa ka soo qeyb galay Madaxda Maamulka Gobolka, Kan degmadda,Odayaal,Haween,Dhalinyaro, Ciyaartooyadii hore ee Gobolka Bari iyo dadweyn aad u tiro badan.
Xafladaan oo ka dhacay Hoolka Xafladaha ee Hotel Jubba Bosaso ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay masuulyiin ka kala duwan.
Gudoomiyaha Cusub ee Ciyaaraha iyo dhalinyaradda Gobolka Bari Abshir Cali Yuusuf (Boqorka) ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu xilka la wareego, waxa uuna amaanay doorka Wasaaradda Shaqadda,shaqaalaha dhalinyaradda iyo Ciyaaraha ku leedahay sidii loo horumar lahaa arimaha wasaaradda loo asaasay.
Waxa uu xusay in Dayac badan ka jiro Xafiiska maamulka Sportiga Gobolka Bari, isaga oo tilaamay in uu ku dadaalayo sidii loo tayeyn lahaa arimaha ciyaaraha iyo Waxbarshadda dhalinyaradda reer Bosaaso.
Intaas ka dib waxaa warqado ay ku qoran yihiin magacyadda naadiyadda heer Gobolka, iyo Heer Degmado Gudoomiyaha cusub ku wareejiyey Gudoomiyihii hore Mustafe Majacase.
Gudoomiye ku xigeenka 1aad iyo Gudoomiye ku xigeenka 2aad ee Maamulka Gobolka Bari ayaa ka mid ahaa madaxdii ka qeyb gashay xafladda iyadda oo uu xafladda soo xiray Gudoomiye ku xigeenka 1aad Ciro Buncun.
Ciro Buncun ayaa sheegay in ay muhiimadda siinayaan sidii loo dayactiri lahaa Garoonka ciyaaraha ee Bosaaso, waxa uuna balan qaaday in muhiimadda koowaad siinayaan sidii loola shaqeyn lahaa Gudoomiyaha Cusub.